Apple isingatarisiri inotangisa iyo iOS 9 Beta 11 | IPhone nhau
Apple isingatarisiri inoburitsa iOS 9 Beta 11
Apple yakazadzisa tarisiro uye nhasi yazivisa chiitiko chayo munaGunyana 12, apo ichatiratidza iyo itsva iPhone 8 uye pamwe zvimwe zvishandiso zvitsva seyakagadziridzwa Apple TV uye ye11th Generation Apple Watch. Asi izvo isu zvataisatarisira ndezvekuti ichavhura imwe nyowani Beta yeIOS XNUMX, uye zvave zvakadaro.
Masikati ano Apple yakaburitsa iOS 9 Beta 11 yevagadziri uye zvishoma gare gare Ruzhinji Beta rwatinorangarira nderechisere. Iyo itsva vhezheni yeIOS 11 inogadzirisa madhiragi uye inovandudza kugadzikana kwesystem, kupora vhezheni yesoftware iyo ichakurumidza kutanga kune wese munhu.
iOS 11 ndiyo vhezheni itsva ye iPhone, iPad uye iPod Touch iyo inosvika mushure mechiitiko ichi munaGunyana 12. Zvichida kuti zuva rimwe chetero tichava neGM (Goridhe Master) vhezheni, yekupedzisira iyo inozove yepamutemo nguva pfupi yapfuura kunze kwekunge vaona kumwe kutadza kwakakosha. Iyo nyowani Control Center, nyowani yakawanda yekuita iyo iPad, kugona kudhonza uye kudonhedza mafaera paApple piritsi uye runyorwa rurefu rwemashoko ichauya kubva paruoko rweiyi nyowani iOS 11 iyo ichaguma ne 32-bit application.
Zvinopfuura zvingangoita izvo Pachiitiko chaGunyana 12, ngatione maficha eIOS 11 atisina kugashira kusvika parizvino nekuti achasarudzika kune iyo iPhone 8. Zviratidzo zve multitasking uye yekuvhara kunyorera, mitsva mabasa ekamera uye mamwe mabasa akagadzirwa chete kune iyo nyowani apuro chishandiso zvirokwazvo ichave nenguva yavo pachiratidziro cheSteve Jobs Theatre uko iyo iPhone 8 ichaunzwa, kana zvisinei zvaunoda kuti iyo nyowani Apple foni inopedzisira yafona. Kwangosara mazuva gumi nemaviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple isingatarisiri inoburitsa iOS 9 Beta 11
Gore rinouya taigona kuona 6,4-inch iPhone ine OLED skrini
Samsung Inosvitsa Gear Sport, Gear Fit 2 Pro uye Iconx Wireless Earbuds kuIFA 2017